[10 / 03 / 2020] Mashruuca Qaranka ee TÜLOMSAŞ ee loo yaqaan 'YHT project' wuxuu la noolaan doonaa isla Fate!	26 Eskisehir
[10 / 03 / 2020] Sahanka ku qanacsanaanta macaamiisha ee mitirka adduunka 2020	34 Istanbul
[10 / 03 / 2020] Mashruuca Wadada Tareenka ee Karasu in la Dhameeyo 2021	54 Sakarya
[10 / 03 / 2020] ARUS iyo RSD Waxay Abaabulaan 'Shirku Waafajinta iyo Xaqiijinta Shirka Tareenka Nidaamka Tareenka'	06 Ankara
[10 / 03 / 2020] MOTAŞ waxay go'aan ka gaari doontaa midabka basaska cusub sahan	44 Malatya
Maalinta: 16-ka July, 2014
RayHaber 16.07.2014 Warbixinta Shirka
Iibsiga ciidda lafdhabarta
Marmaray Ayaa Iftiiminaysa
Marmaray waa la iftiimiyey: Waxaan mar dhow qoray in Marmaray ay halis weyn ka fileyso dadka lugaynaya ee jooga Kazlıçeşme, Yenikapı iyo Üsk stationsdar saldhigyada. Dhamaan seddexda saldhig, ma jirin wax talaabooyin ah oo loo qaaday si loogu ogolaado rakaabka inay ka talaabaan wadada. Rakaabka, duugista [More ...]
Teknoolajiyada Simens Rail Technology ayaa loo adeegsaday Xarunta Sayniska ee Hasanbey
Hasanbey Logistics Center ee Siemens Rail Technology Isticmaalay: Turkey State Tareennada (TCDD), oo ku yaalla waqooyi galbeed ee Turkiga iyo qaatay daboolaya qiyaastii 540 kun oo mitir murabac oo u janjeedha soo saarka rail Hasanbey Logistics Center galay hawlgalka. [More ...]
Waxay rabaan inay ka iibiyaan qoomameynta Tareenka Xawaaraha Sare: Sapanca Regrets Association Madaxweynaha Tahsin Bostan, tareenada looma ogola inay iibiyaan qoomamaynta 60 qofka wuxuu ahaan doonaa shaqo la’aan, ayuu yidhi. Xawaare sare haddii saraakiisha Gobolka Tareenka (FDI) oggolaadaan [More ...]
Sakarya waxay noqotay xarun warshad tareen oo heer sare ah
Sakarya wuxuu noqday xarunta warshadaha tareenka ee heerka koowaad: AK Party Madaxweyne kuxigeenka dadweynaha iyo warbaahinta İhsan Şener ayaa soo wariyey in Sakarya uu maal galiyay in kabadan 12 bilyan Lira sanadkii la soo dhaafay ee 9,5. Sener, wuxuu ku qoray qoraalkiisa [More ...]
Nasrettin Hodja iyo Tram
Nasrettin Hodja iyo tram: Nin ayaa aaday Nasrettin Hodja. Kaliya dhib, '' Macallinkaygu wuxuu heli lahaa daawo. Gurigeygu waa ciriiri yahay. Hal digaag oo leh afar caruur ah, hal il kuma haleyn karo qolka. Waxaan niyad- [More ...]
Ururka Dalladaha Tareenka ayaa booqday Bursa maanta
Booqashada Ururka Lovers Association ee booqashada maanta ee Bursada Maanta: Maamulka Ururka Tareenka Lover waxay booqdeen Bursada Bugün waxayna ku nuuxnuuxsadeen inay noqon doonaan kuwa raacaya nidaamka isku xirka xiriirka Bursa ee gobolada ku xeeran. Gaadiidka ugu muhiimsan ee dalalka casriga ah [More ...]
Alifuatpaşada wuxuu ka soo horjeedaa xidhitaanka wadada tareemada
Wax ka qabashada xiritaanka dariiqa tareenka ee Alifuatpaşada: Wadada tareenka ee Alifuatpaşa ayaa la dhameystiray iyada oo la dhammeystirey shaqooyinka isgoyska. Xiritaanka marinka dadka lugaynaya iyo taraafikada gawaarida ee mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare [More ...]
Halkan waa xabsiga kunka kun ee 20
Halkan waxaa ah xabsiga ay ku nool yihiin 20 kun oo qof: degmada Yunus Emre ee Manisa Barbaros dadka deggan xaafadaha, Hawlaha Biyaha ee Gobolka, ka dib TCDD falcelinta aagga ku hareereysan waxaa ku hareereysan doona deyrar fiiqan. “20 kun oo qof [More ...]
Waxaa lagu qabtay isaga oo xaday gaari faras-faras leh: qof xaday biriijyadii birta laga soo saaray intii lagu guda jiray howlaha dayactirka tareenka ee degmooyinka Tatvan iyo Güroymak ee Bitlis ayaa lagu qabtay falka. Buundada u dhaw tuulada Oduncular ee Güroymak [More ...]
Khadka meter-ka ee Incirli-Sogutlucesme wuxuu noqon doonaa walaasha Marmaray
Qadka metro-ka İncirli-Söğütlüçeşme wuxuu walaas u noqon doonaa Marmaray: walaashey waxay tagtaa Marmaray ee Istanbul. Xariiqda mitirka 28 km ee u dhaxeysa İncirli iyo Söğütlüçeşme waxay dhaafi doontaa Bosphorus waxayna isku xiri doontaa labada qaaradood. Daraasadda qadka waxaa lagu dhammeyn doonaa 2015. [More ...]
Tartanka kubadda cagta ee Ankara
Tartanka Dhaqanka Kubbadda Cagta Ankara ee Subway: Sannadkan horyaalnimada ah ee N 10 Caadi ahaan Kubadda Cagta Tartanka X halkaas oo kooxda 2014 ay ku tartameen unugyada Ankara Metro wuxuu ahaa Madaxa Nadiifinta. 5'er doogga cawska ee ay leedahay Metro Plant [More ...]
Erzurum boodboodo ayaa burburay
Dhismooyinka boodhka ee boodhka ah ee Erzurum ayaa dumay: Erzurum waxaa loo martigaliyay 2011 munaasabadda 25-aad ee Ciyaaraha Jiilaalka Dunida Jiilaalka ee lagu dhisay hortiisa dhul-gariirka ka dhacay. Runway-ga si buuxda looma adeegsan karo [More ...]
Sumitomo Dhismaha mashiinada iyo suuqa ee Turkey
Sumitomo Dhismaha mashiinada iyo suuqa ee Turkey: dhulka qoda crawler adduunka iyo cod ku leedahay wax soo saarka ee laami mashiinada xaareysa, brand Sumitomo, TSM Global Sumitomo Dhismaha Makiinado Turkey bilaabaa in la iibiyo ee Turkey ka yar saqafka. 400 [More ...]
Mashruuca Wadada Tareenka ee Karasu in la Dhameeyo 2021
ARUS iyo RSD Waxay Abaabulaan 'Shirku Waafajinta iyo Xaqiijinta Shirka Tareenka Nidaamka Tareenka'
IETT waxay kor u qaadaysaa tayada Gaadiidka Dadweynaha
Alanya Aaladda Gawaarida Waxbarshada Gawaarida Awoodda Leh ayaa Fidinaya
Shaqada Saldhigga tareenka ee Balıkesir wuxuu ku socdaa xawaare buuxa
Ogeeysiinta soo iibsiga: iibso Ray
Maarso 11 @ 14: 00 - 15: 00
Ogeysiinta Qandaraaska: Iibsashada Carrabka iyo Xulashada Musiibada ee UIC60 maqashoodu
Maarso 12 @ 11: 00 - 17: 00
Ogeysiiska Qandaraaska: B-70 Qashinka Baadiyaha ah ayaa la gadan doonaa
Maarso 12 @ 14: 00 - 15: 00
Ogeysiis Qandaraaska: Helitaanka Navel Xulasho Gaar ah oo loogu talo galay maqasyada S-49
Maarso 12 @ 14: 30 - 15: 30
Mashruuca Antakya Cable Car oo Mar Kale Bilaabmaya
Jiga ee Degaanka Rate Up ee Turkey
Micnaheeda Logo PEUGEOT Logo
Micnaha BMW Logo
Micnaha Audi Logo
Micnaha astaanta Alfa Romeo
Tijaabada Tesla Model Y Qiyaasta
Dhiigbax cusub ayaa u timaada qoyska SUV
2020 Skoda Octavia RS waxaa lagu soo bandhigay sida iV Online
Mercedes 2 wuxuu joojiyaa soosaarideeda
U Diyaar Garowga Karasu ee Karasu
Khaladaadka Qorshaynta ee Wadada Wadada Diyaaradaha Istanbul ..! 300 mitir